Myanmar Monk Student Association: ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဝါဒများ
ဘုရားရှင်နှင့် အယူဝါဒရေးရာများ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောခဲ့ကြသော အတွေးအခေါ် ပညာရှင် ဆရာကြီး ၆ ဦးကို ဗဟုသုတ ဖြစ်ပါစေခြင်းငှာ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ပူရဏကဿပဆရာကြီးက သတ်ခြင်း၊ ခိုးခြင်းစသော မကောင်းမှုများကို ပြုသော်လည်း ပြုရာမရောက်၊ လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်း သီလစောင့်ခြင်းစသော ကောင်းမှုများလုပ်သော်လည်း ကုသိုလ်မဖြစ်၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တို့၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ဟူ၍ မရှိ၊ အတ္တကို အကျိုး မသတ်ရောက်စေနိုင်၊ လူသေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဓာတ်များအားလုံး ဆိုင်ရာ မူလဓာတ်နှင့် ပူးပေါင်းသွားကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရော စိတ်ဝိညာဏ်ပါ ဘာတစ်ခုမှ ကြွင်းကျန် မနေရစ်ပြီဟု ဟောပြောသည်။ (အကိရိယဒိဋ္ဌိခေါ်၏၊ အကြောင်းပယ်သည်။)
၂။ မက္ခလိဂေါသာလ ဆရာကြီးက သတ္တ၀ါမှန်သမျှ အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်နေကြ၏။ ညစ်ညူးစေရန် စင်ကြယ်စေရန် အကြောင်းမရှိ၊ လုပ်ယူ၍မရ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု မှန်သမျှ အချည်းနှီး၊ ဖြစ်အောင်လုပ်၍ မရ၊ မဖြစ်အောင်လည်း လုပ်၍မရ၊ သူ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်နေရသည်၊ သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေရသည်။ ကောင်းတာလုပ်လုပ် မကောင်းတာလုပ်လုပ် လုပ်သည်ဖြစ်စေ မလုပ်သည်ဖြစ်စေ လူမိုက်ရော လူလိမ္မာပါ မဟာကပ် ရှစ်သန်းလေးသိန်း ရှိလျှင် သံသရာအလည်ရပ်၍ သတ္တ၀ါအားလုံး ဘ၀ပြတ်ပြီ။ အပ်ချည်ရှိသလောက်သာ အပ်ချည်လုံး ပြေးရသကဲ့သို့ ဖြစ်သည် ဟု ဟောပြောသည်။
(အဟေတုကဒိဋ္ဌိ - နိယတ၀ါဒခေါ်၏။ ကြောင်းကျိုး ပယ်သည်။)
၃။ အဇိတကေသကမ္ဗလ ဆရာကြီးက မကောင်းမှုလုပ်သော်လည်း မကောင်းကျိုး မရှိ၊ ကောင်းမှုလုပ်သော်လည်း ကောင်းကျိုးမရ၊ အတ္တသို့ အကျိုးမသတ်ရောက်စေ၊ မိုက်သူလှူ၍ လိမ္မာသူ စားသည်။ တမလွန်ဘ၀မရှိ၊ ငရဲ နတ်ပြည် ဘာမှမရှိ၊ မိဘနှစ်ပါးအပေါ် ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး အကျိုးအပြစ် မရှိ၊ အသိအမြင်ပေါက်သော သူတော်သူမြတ်မရှိ၊ လူဆိုသည်မှာ အတူတူချည်း၊ ဓာတ်လေးပါး အစုအဝေးသာ၊ သေလျှင်ပြတ်ပြီ၊ မြေဓာတ် မြေနှင့်ပေါင်း၏။ ရေဓာတ်ရေနှင့် ပေါင်း၏ ဟုဟောပြောသည်။ (နတ္ထိဒိဋ္ဌိ - ဥစ္ဆေဒ၀ါဒခေါ်၏။ အကျိုးပယ်သည်။ အကြောင်းပယ်လျှင် အကျိုးပယ်ပြီး၊ အကျိုးပယ်လျှင် အကြောင်းပါပြီး ဖြစ်၍ ဤသုံးဦးစလုံး ကမ္မ၊ ကမ္မဖလ နှစ်မျိုးပယ်၍ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။)
၄။ ပကုဓကစ္စာယန ဆရာကြီးက ဖန်ဆင်းရှင်ကို လက်မခံ၊ အမြဲတည်သော ထာဝရဓာတ် ခုနှစ်(၇)ပါးသာ ရှိသည်။ မြေ. ရေ. လေ. မီး. သုခ. ဒုက္ခ. အသက်ဇီဝ. ဓာတ်(၇)ပါး သီးခြားစီ တည်ရှိနေကြ၏။ တစ်ခုက တစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖန်တည်း ချယ်လှယ်ခွင့် မရှိ၊ ချမ်းသာအောင် သက်သာအောင် လုပ်၍မရ။ ဆင်းရဲအောင် သေကြေအောင်လည်း လုပ်၍မရ။ လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်သော်လည်း သတ်ရာမရောက်၊ ပဲနောက်ပုံထဲ တုတ်ဖြင့်ထိုးလျှင် ပဲနောက်ကိုမထိ၊ ပဲနောက်စေ့များကြားက တုတ်ဖြတ်သွားသကဲ့သို့ လက်နက်သည် ဓာဝရဓာတ်ကိုမထိ၊ ဓာတ်(၇)ပါး ကြားကသာ ဖြတ်သွား၍ သတ်သည်မမည် ဟု ဟောပြောသည်။
(အကိရိယဒိဋ္ဌိပင်၊ အညောည၀ါဒခေါ်၏။ ဓာတ်(၇)ပါးဟူသည် အတ္တကိုပင် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်၍ သဿတ၀ါဒဟု ခေါ်ရသည်။)
၅။ နိဂဏ္ဌ နာဋပုတ္တဆရာကြီးက ဂေါတမဗုဒ္ဓထက် အနည်းငယ်ကြီး၏။ မဟာဝီရဟုလည်း ခေါ်ကြ၏၊ ယခုအခါ ဣန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဂျိန်းဘာသာအမည်ဖြင့် ဤ၀ါဒတစ်ခုသာ ကြွင်းကျန်တော့၏၊ အ၀တ်ဝတ်သော ဂိုဏ်းနှင့် အ၀တ်မ၀တ်သော ဂိုဏ်းနှစ်မျိုးရှိ၏။ သူ့ဝါဒက စောင့်စည်းမှုလေးမျိုးကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။ (ရေ၌ အသက်ရှိသည်ဟု ခံယူသဖြင့်) ရေအေးမသုံး မစွဲရ၊ မကောင်းမှုအားလုံး မလုပ်ရ၊ မကောင်းမှုအားလုံးကို ပြင်းထန်တင်းကြပ်စွာ ဆွေးမြေ့သွားအောင် ဖယ်ရှားရ၏၊ မကောင်းမှုအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ရ၏၊ သာမညဖလသုတ် ပါဠိတော်၌ ဤစောင့်စည်းခြင်း လေးမျိုးကိုပြသည်၊ အချို့ကမူ မသတ်၊ မခိုး၊ မလိမ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမထားရ၊ သို့မဟုတ် အဗြဟ္မစရိယ စောင့်စည်းခြင်းဟု ဆိုသည် (စတုယာမ သံဝရ ၀ါဒ၊ အနေကန္တ၀ါဒ ဟု ခေါ်သည်)
၆။ သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တ (သိဉ္စည်း) ဆရာကြီးက ဥပတိဿ ကောလိတ တို့၏ ဆရာဖြစ်ဖူး၏၊ သူ၏၀ါဒကား ဘာကိုမှ ၀န်မခံ၊ အမိမခံ၊ ရှောင်လွှဲလှီးလွှဲသော အဖြေကိုသာ ပေးလေ့ရှိသော ၀ါဒဖြစ်၏။ သူ့အယူအဆ ဘာဟုသိရန် မလွယ်၊ အမရာခေါ်သော ဖမ်းရခက်သော ငါးတစ်မျိုးနှင့်တူသော (အမရာဝိက္ခေပ) ၀ါဒ ဟုခေါ်သည်၊ အဇာတသတ်မင်းကြီးက ဆရာကြီး ၆-ဦးထဲမှာ သိဉ္စည်းဆရာကြီးကို အတွေဝေဆုံး အမိုက်ဆုံးဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ရှိရင်းစွဲ ဗြဟ္မဏ၀ါဒအပြင် ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင် ဘုရားအမည်ခံ အထက်ပါဆရာကြီးများ၏ အယူဝါဒတို့ကို ကြည့်လျှင် ဗုဒ္ဓမပွင့်ပေါ်မီနှင့် ပွင့်ပေါ်စခေတ်က လူသားတို့ အယူဝါဒရေးရာ မည်မျှတွေဝေစရာ ဖြစ်သည်ကို မြင်သာလှ၏။ ခိုးမှုသတ်မှုများကို အပြစ်မရှိဟု ဆိုသဖြင့် ထိုဝါဒတစ်ခုတည်းဖြင့်ပင် ကမ္ဘာပျက်နိုင်လောက်သည်။ လူမိုက်အားပေးသော မွေးထုတ်သော ၀ါဒဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာကြီးတိုင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ဝေနေယျတို့လည်း များစွာရှိနေခဲ့ကြသည်။ အလွန်သိမ်မွေ့လှသော ဗုဒ္ဓ ဓမ္မသည် ထိုပတ်ဝန်းကျင်၌ ထိုးထွက်လာခဲ့သည်၊ မည်မျှ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရမည်ကိုလည်း စဉ်းစားရာ၏။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ thadawa on Friday, 20 July 2012